Kaspersky – Windows – Vessoft
software Tani laga xannibo sababtoo ah cunaqabatayn Yukreeniyaan ka dhanka Ruush Federation.
Kaspersky – antivirus awood ilaalinta lagu kalsoonaan karo oo aad computer. software wuxuu bixiyaa difaac ka dhanka sare fayrasyada, Trojans, spyware, kolkaasaa dirxi galay, waxyaalo waaweyn, iwm Kaspersky si toos ah ay hubinaysaa ammaanka khayraadka kala duwan ee web, software degsan iyo files. software The baaritaanku heerka ammaanka ee Wi-Fi iyo socodsiinayaa user ku saabsan ay u nugul. Kaspersky damaanad lagu kaydiyo si ammaan ah sirta ah, sir xogta iyo abuuraa gurmad ah. Sidoo kale waxaa ku jira Kaspersky hab gaar ah si ay u xaddido carruurta ay helaan websites la content khatar ah.
Protection ka dhanka ah Trojans iyo spyware
dhirta Safe of websites
Hubinta ah files degsan
Ogaanshaha ah dayacanka nidaamka
Kaspersky Software la xiriira:
software The in la ogaado oo ka saar fayraska. software The kuu ogolaanayaa inaad baarista nidaamka noocyada kala duwan ee fayraska, spyware iyo hanjabaado kale.
SUPERAntiSpyware 6.0.1248 Free Edition iyo Professional
Tool si aad u ilaaliso computer ka dhanka ah hanjabaad kala duwan. Software ayaa awood u tahay in la ogaado noocyada kala duwan ee fayraska oo la helo faylasha cudurka ee karantiil.
Avast 17.7.3660 Free Antivirus, 12.3.3154 Premier; 12.1.3076 Internet Security...
The antivirus caanka ku ah ilaalinta nidaamka ka dhanka ah noocyada kala duwan ee hanjabaad. software waa ay awoodaan in ay ku kaydiso passwords user ee ammaanka iyo ilaalinta network guriga ka dhanka ah spyware ah.
العربية, English, Français, Español...
qalab The si ay u difaacaan fayraska, spyware iyo rootkits. software wuxuu bixiyaa joogtid ammaan ah ee internet-ka iyo hubinayaa gaadiidka ee khatar gelin kara.
Avira AntiVir 15.0.30.29 Antivirus iyo Security Suite
The antivirus caanka ah si ay u ilaaliyaan nidaamka ka dhanka ah hanjabaado kala duwan oo fayrusyada. software waa ay xakameyn karaan aalado network iyo xaddido helitaanka internetka ee dadka waaweyn.
software The in la ogaado oo la joojiyo nidaamka shaqada ee furin, in lmahu howlgalka dhamaystiran oo antivirus ugu weyn.
Comodo 10.0.1.6294 Antivirus, Internet Security iyo Firewall
xirmo software antivirus The si ay u ilaaliyaan aad computer. software wuxuu bixiyaa joogsatay ammaan ee network iyo kormeera gaadiidka ee khatar gelin kara.
Antiviruses Ayna System
aalad waxaa loogu talagalay in lagu ogaado oo ka saar modules advertising. software The wax ku ool ah ka saaraysaa toolbars, unugyada ad iyo daro aan la rabin.
NANO Antivirus 1.0.100.85065
software antivirus ayaa si aad u ilaaliso computer ka dhan ah spyware, adware, ransomware, furin iyo walxaha aadka u halista ah.
360 Total Security 9.2.0.1290
Software antivirus lagu kalsoonaan karo oo la haysto tiknoolijiyad casri ah si loo xaqiijiyo badbaadinta dhamaystiran oo nidaamka. Sidoo kale software ka taageertaa kala duwan oo qalab dheeraad ah si aad u nadiifiso iyo tayadoodii nidaamka.
Comodo Dragon 58.0.3029.115
browser Soonkii waxaa diiradda lagu saaray amniga iyo arimaha gaarka ah ee user. blocks software The internetka xaasidnimo, spyware iyo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isku xiro kordhinta.
Webcams Qabashada Screen
software waxay u adeegtaa si aad u dalbato saamaynta video, naqshadeynta 3D stereoscopic iyo waxyaabaha kartoon ka badan image ka webcam ah.
Software si loo saaro oo aan loo baahnayn faylasha, daro iyo qashin kale ee nidaamka. Software ayaa awood u si meesha looga saaro xogta ka soo diiwaanka iyo soo celinta nidaamka ay dhacdo in shil.
Software si ay u qoraan dhacdooyinka kaas oo ka dhici shaashadda kombiyuutarka aad. Sidoo kale software awood u ku darto saamaynta kala duwan iyo codad si ay videos ah.
software The si ay u abuuraan network dalwaddii gaarka loo leeyahay oo u dhexeeya kombiyuutarada iyada oo loo marayo internet-ka. The algorithms encryption kala duwan waxaa loo isticmaalaa tiirka ilaaliyo in network degaanka.
Mozilla Firefox 56.0.1 iyo 57.0b8 rc 3
WPS Office 10.1.0.5579
Google Chrome 61.0.3163.100, 62.0.3202.38 beta iyo 63.0.3223.8 dev
Carambis Driver Updater 2.4.2.9633